Liyadlondlobala ibhizinisi labesifazane abangabalimi | Isolezwe
Liyadlondlobala ibhizinisi labesifazane abangabalimi
intandokazi / 25 January 2018, 10:14am / ZANELE MTHETHWA
UZIMISELE ngokuthi imikhiqizo yabo ifinyelele kuwo wonke amazwe uNkk Busisiwe Molefe ongumlimi osebenza nabanye besifazane abatshala nabo utamatisi namakinati
USEPHAKELA amazwe aphesheya owesifazane ongumlimi ovelele KwaZulu-Natal ofake nabanye besifazane abebenganelisekile kwimifelandawonye abebekuyo.
UNkk Busisiwe Molefe (50) waseGamalakhe ePort Shepstone, ungumsunguli weBBS farming abayiqambe ngamagama abanye besifazane asebenza nabo okunguBongi noSlindile. Liyadlondlobala ibhizinisi labo likatamatisi kanti sebetshala namakinati.
Elandisa Isolezwe uthe baqala ukutshala ngo-2009 emuva kokuthola ipulazi elingama-hectare angu-17.
“Bengivele ngithanda ukulima ngiphuma kumfelandawonye owenza ama-hydroponics. Besingajabulile kwimifelandowonye ebesikuyo ngoba ibingasebenzi njengamabhizinisi yingakho nganquma ukuthi siziqalele ukulima. Sike saba nenkinga nepulazi lethu saqashisa ngalo izinyanga eziyisishiyagalolunye labuyela kithina ngo-2009. Ngesikhathi libuyela kithina bese silutholile uxhaso lwemali eThala,” kusho uNkk Molefe.
Zisheshe zabonakala izithelo zokuba ngumlimi kuNkk Molefe owathola indondo yokuba ngumlimi ovelele ngo-2009. Imali ayithola wayifaka epulazini. Uphinde wathola enye indondo ngo-2012 nangonyaka odlule emcimbini ohlelwa yiThala Imbokodo Iyazenzela Awards.
Yize ibhizinisi lihamba kahle kodwa kube yinselelo ukungena ezitolo ngoba bebengakawalungisi amanye amaphepha abagunyazayo. Okubajabulisayo wukuthi wonke amaphepha aselungisiwe nemikhiqizo yabo isihloliwe yaphasiswa ukuthi ingangena kunoma yiziphi izitolo.
“Besikwazi ukuphakela izitolo kodwa singakwazi ukusayina izinkontileka zesikhathi eside ngenxa yokuthi besingakaphasiswa. NgoMashi nonyaka sizophothula ukuhlolwa kokugcina okuzosigunyaza ukusayina izinkontileka,” kusho yena.
Yize abanye abalimi bekhala ngokungasekwa ngabalimi asebemnkantshubomvu, uNkk Molefe uthe abakaze babe nenkinga. Umlungu owabadayisela ipulazi uthe usefana nelungu lomndeni ngendlela abasiza ngayo. Ubacabele indlela yokutshala amakinati abizwa ngama-macadamia asefinyelele eChina, Europe nase-United States of America. Kukhona umlimi abasebenzisana naye obadayisela kwamanye amazwe.UNkk Molefe waphothula * -matric eBhekameva High eXobho wavolontiya enhlanganweni yomphakathi i-Advancement Community Development Corporation. Wakhethwa ukuyomela elakuleli eSweden enhlanganweni abevolontiya kuyo. Lokhu kwamvulela ithuba lokuhlangana nomndeni waseSweden owamnika imali yokuqhuba izifundo zakhe. Ngenxa yothando lokulima wabuyela kuleli wenza i-Agricultural Extension and Rural Resources Management e-University of KwaZulu-Natal.